Abakhiqizi Abavamile, Abahlinzeki - I-China Casual Factory
Izicathulo zakamuva eziguquguqukayo nezikhululekile zamadoda zokwakhiwa kwe-ligthtweight yazo zonke izinsuku zokugqoka
Lesi isiteki esifanelekile sokugqoka nsuku zonke. Isikhumba nendwangu yendwangu phezulu. Ukuvalwa kwentambo kokulingana ngokwezifiso. Izindwangu ezinethezekile zezindwangu. Uyaphefumula, unyawo oluhlanganisiwe. I-outsole ye-EVA engasindi nokho eqinile. Inombolo Yolwazi Lomkhiqizo Inombolo No.: 5005 Igama lomkhiqizo: izicathulo ezigijimayo ezifanelekayo zokugijima zamadoda Izinto ezingaphezulu: inkomo ye-suede Izinto zokwakha: indwangu Ubulili: Usayizi wamadoda: Isizini se-41-46: ihlobo, intwasahlobo MOQ: ngazimbili ezingama-500 ngombala ngamunye i-OEM / ODM: yebo Ilogo: ngokwezidingo zakho Ukupakisha & Ukukhulula ...
izicathulo zabesilisa zokuzilibazisa ezinokwakheka okudala okuklanywe ngenhla okhiqizwe yifektri yezicathulo
Lungiselela impelasonto esebenzayo ngezicathulo ezibukeka kahle ze-Leather Series Dress Casual. Lezi zicathulo zinokubukeka okungajwayelekile kwesicathulo sokugqoka kanye nokunethezeka okulula kwesiteki. Okubalulekile, okwakudala okugqokwa ngengubo yakho oyithandayo ibhulukwe, amakhakhi, namajini. Uppers wangempela wesikhumba. Umlondolozi wamanzi nowokugcina amabala ozivikela ngokushesha iziphuzo ukuze ungakhathazeki ngokuchitheka noma ngamabala. Ukuvalwa kwentambo yokulingana okulungisekayo. Okuphindayo Rebound ezinyaweni embhedeni for exc ...
Isitolo esidayisa yonke impahla Men Men Canvas Indwangu Comfort Breathable Casual Shoes Fashion Sneakers
Kuzoba lula ukukhukhulwa ngesitayela esihle solwandle sesicathulo sesikebhe esigeziwe. Ingxenye yokuqoqwa kwesizini entsha. I-Canvas engenhla ephelile ukugeza. Idizayini yokwakheka ngenketho yezintambo. Umvikeli wezinzwane onombhalo. Ukwakhiwa okuhlanganisiwe kunika isibopho esiphephile phakathi kwaphezulu nangaphandle. Ikhola elifakwe kancane ukuze uthole induduzo engezwe unyawo. Isikhumulo sememori esisuswayo siletha induduzo encane engasindi kanye nokwesekwa okuhlangene kwe-arch. I-EVA outsole ehlala njalo ihlinzeka ngokudonsa okuhle. Ulwazi lomkhiqizo ...
Umkhiqizi Wekhwalithi Ephakeme Yezicathulo Ezintsha
Faka izinongo ezithile kwisitayela sakho ngale ndlela yakudala. Izicathulo ezivamile ezinomfanekiso womgijimi wamagugu ophefumulelwe ama-spikes wethrekhi yokusebenza ephezulu yama-70s. Abaphezulu bezinto ezisezingeni eliphakeme ze-PU. Ukuvalwa kwezintambo zendabuko ukuze kulingane kahle. Ikhola nolimi olunamakhaphukhaphu nolimi kunikela ngokulingana okulingene, okunethezeka. Izindwangu zezindwangu ezinezinyawo ezihlanganisiwe zokunethezeka okwengeziwe. I-EVA outsole esezingeni eliphansi yokugqoka okuqinile. Inombolo Yolwazi Lomkhiqizo: Inombolo 5014 Igama lomkhiqizo: imodeli yakudala izicathulo ezikhululekile ezikhiqizwa ...
I-2020 Design entsha yesikole esidala engasindi amateki amateki wokugijima izicathulo
I-Low Top Sneaker ayisindi futhi yenziwa ngemesh yokuphefumula enesikhumba esiyimbumbulu. I-lace-up ifaka uzwane oluqinisiwe kanye ne-outsole yerabha eguquguqukayo. Ulwelwesi lwe-Mesh nombhede onyawo oluthambile ukuze uthole induduzo ephelele. Inombolo Yolwazi Lomkhiqizo Inombolo: 5007 Igama lomkhiqizo: i-unisex design entsha enesitayela engasindi yokugijima isicathulo Okuphezulu kwento: isikhumba sefeksi, imeshini Lining impahla: mesh Ubulili: indoda Usayizi: 41-46 Isizini: ihlobo, intwasahlobo MOQ: ngazimbili ezingama-600 ngombala ngamunye i-OEM / ODM : yebo Ilogo: ngokwezidingo zakho Ukupakisha ne-Deliv ...
Ihlobo Autumn New Men Shoes Lace-Up Microfiber Isikhumba Casual Shoes Men Sneaker Winter Men Casual Shoes
Kudala kubhekwe njengokuphelele ekusebenzeni kwezobuchwepheshe phakathi nama-80s, izicathulo zibuya ngokuqinile ngesitayela sanamuhla okuqinisekile ukujabulisa abadala nabancane ngokufanayo! Amateki aphakeme kakhulu ku-silhouette esezingeni eliphansi enesikhumba sokwenziwa. Ikhola nolimi olunamakhaphukhaphu nolimi ukunethezeka, ukulingana nokuzizwa. Ulwelwesi lwezindwangu olunombhede onyawo okhonciwe. Ukuvalwa kwentambo kwendabuko ngokulingana okuphephile. I-Phylon sole inikeza ukunakekelwa nokungezwa okuguqukayo. Inombolo Yemininingwane Yomkhiqizo: 5022 Igama lomkhiqizo ...
zakamuva zekhwalithi ephezulu ephefumulayo insole ethambile iraba outsole indwangu izicathulo ezingenhla ezikhululekile zamadoda
Faka umklamo womgijimi wevintage ekhabethe lakho lezingubo ngesithonjana sesithonjana samateki amasha. Izicathulo ezivamile ezinesikhumba sokwenziwa nezindwangu eziphrintiwe ku-silhouette yezemidlalo. Ikhola nolimi olunogwebu. Ama-linings athambile ne-foam insole ekhishwayo inikezela induduzo yosuku lonke. Ukuvalwa kwezintambo zendabuko. I-outsole yenjoloba ehlala njalo. Inombolo Yolwazi Lomkhiqizo: Inombolo yomkhiqizo: 5016 Igama lomkhiqizo: indwangu esezingeni eliphakeme emisha yemfashini izicathulo ezikhululekile Izinto ezingenhla: isikhumba sokwenziwa, indwangu eneLining yokuphrinta ...